Maitiro ekumisikidza default browser pa iPhone, Emulator.online ▷ 🥇
Maitiro ekumisikidza default browser pa iPhone
Nekuuya kweiyo iOS 14 yekuvandudza ye iPhone, zvinokwanisika kushandura iyo default application kuvhura mawebhusaiti uye zvinongedzo mukati meemail, chats uye social network, pasina hazvo kufanira kuenda kuburikidza neSafari application (gara iri default default mune zvese Apple zvigadzirwa). Izvi zvingaratidzika sezvisingakoshi uye zviri pachena, kunyanya kana tikabva kuApple world, asi imwe yemasimba / kusimba kukuru kwaApple kwaikonzerwa chaizvo nehukama hwakasimba neApple's system application, izvo zvaisakwanisika kunyatso tarisa. Kana izvi zvikaonekwa semukana wekuchengetedza ecosystem yeApple kunyatsoenderana, zvinodzikisira zvakanyanya rusununguko rwemushandisi, uyo aigona kutadza kuvhura zvinongedzo nebrowser yesarudzo yavo.
Mumhanzi unoita kunge wachinja neichi chiitiko: regai tione pamwechete maitiro ekumisikidza default browser pa iPhone, kusarudza pakati penzira dzakawanda dzinowanikwa muApp Store (kubva kuGoogle Chrome kuburikidza neMozilla Firefox, Opera uye browser risingazivikanwe reDuckDuckGo).
Muzvitsauko zvinotevera isu tinotanga kukuratidza maitiro ekutarisa masystems e iPhone yedu uye, chete mushure mekuwana iyo iOS 14 inoshanda sisitimu, tinogona kuenderera mberi nekuisirwa bhurawuza redu uye nekuita shanduko dzinodikanwa kuti riite iyo default browser pane yedu iPhone.
Maitiro ekugadzirisa sei iPhone
Tisati taenderera, isu tinogara tichikurudzira izvozvo tarisa zvekuvandudzwa kwe iPhoneKunyanya kana tisina kucherechedza chero shanduko yeshanduro kana kugadzirisa mumazuva mashoma apfuura kana mwedzi. Kuti uvandudze iyo iPhone, ibatanidze kune inokurumidza Wi-Fi network (kumba kana muhofisi), tinya pane chishandiso Configurations, ngatiendei kumenyu General, tinopfuurira mberi Software kugadzirisa uye, kana paine chigadziriso, chiise nekutsikirira Dhawunirodha uye isa.
Pakupera kwekurodha pasi tinotangazve iyo iPhone uye kumirira iyo nyowani yekushandisa system kuti itange; kana pasina kugadzirisa kune iOS 14 (pamwe nekuti yedu iPhone yachembera), hatigone kuita shanduko yeiyo default browser. Kuti uwane rumwe ruzivo, tinokurudzira kuverenga gwara redu. Maitiro ekugadzirisa sei iPhone. Kana pachinzvimbo isu tichida kuchinja yedu iPhone kuti ive nyowani kana yeyakagadziridzwa asi inoenderana neIOS 14, tinokukoka kuti uverenge gwara redu Ndeipi iPhone yakakodzera kutenga nhasi? Mavhesi uye mamodheru aripo.
Maitiro ekuisa kana kugadzirisa yechitatu-bato browser
Mushure mekuvandudza iyo iPhone, isu tinoisa yedu yatinofarira browser nekuvhura iyo App Store uye nekushandisa menyu kutsvaka, saka unogona kutsvaga Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera Kubata, kana iyo DuckDuckGo browser.
Kana isu tatova neakafanana kana mamwe mabhurawuza akaiswa pane yedu iPhone, usati waenderera mberi nechitsauko chakakosha chebhuku rino, ita shuwa kuti vanovandudzwa kune yazvino vhezheni nekuvhura iyo App Store, uchimanikidza icon yeprofita yedu kumusoro kurudyi uye pakupedzisira kudzvanya Gadziridza zvese. Tinoziva here mamwe mabhurawuza ekuSafari? Tinogona kugadzirisa izvi ipapo nekuverenga kwedu gwara Iwo akanakisa mabhurawuza yeiyo iPhone nepoad nzira dzeSafari.
Maitiro ekuisa iyo nyowani default browser
Mushure mekurodha pasi kana kuvandudza yechitatu-bato bhurawuza pane iyo iPhone, tinogona kuimisa seye default browser kune yega yega link kana peji rewebhu ratinozovhura nekutitora kuenda kunyorera. Configurations, kupuruzira kusvikira iwe wawana zita rebrowser uye, kana yangovhurwa, pinda pamenyu Default browser app uye ita sarudzo yedu kubva pane iyi runyorwa.
Kudzvanya pazita rebrowser kucharatidza cheki chiratidzo, chiratidzo chekuti system yabvuma shanduko. Isu hatione browser redu mune rondedzero kana chinhu chisingaoneke Default browser app? Isu tinoongorora kuti bhurawuza nehurongwa hwekushandisa zvave zvechizvino (sezvinoonekwa muzvitsauko zvakapfuura), zvikasadaro hazvingakwanise kuita chero sarudzo.
Neshanduko iyi diki, Apple inoedza kubuda mubhokisi uye kuswedera padhuze nekuchinja uye kuita kunoonekwa mune chero yazvino Android smartphone. Muchokwadi, neIOS 14 hatina kusungirirwa pakushandiswa kweSafari yekubatanidza yega yega yakavhurwa mumaemail kana chats, izvo zvinotibvumidza kushandisa browser yedu yatinofarira pese pazvinenge zvakakodzera. Izvi zvinogona kuoneka se "hafu yechimurenga" kana kuti "shanduko": Apple yakaona kuti vashandisi vayo havawanzosungirwa kunyorera yainoburitsa uye kuti, kazhinji, vanoshandisa Safari chete nekuti system haina. unogona kushandisa mamwe mabhurawuza nekukasira (izvo zvave kugona ne iOS 14) Pamusoro pebrowser, iyo default application switch inowanikwawo kune mamwe masystem sisitimu akadai seMeyili: saka, isu tinokwanisa kuvhura edu maemail kana zvakabatanidzwa nevamwe vatengi tisinga pfuure kuburikidza nehurongwa hwekushandisa hwakabatana neApple nharaunda (iyo nekukurumidza asi kwete nguva dzose dziine mamwe mabasa).
Kana isu tichida kushandura default maapplication pane Android smartphone, tinokurudzira kuti iwe uverenge gwara redu Maitiro ekuchinja magadziriso ezviitiko pa Android. Isu tinowanzo shandisa Windows 10 komputa asi isu hatizive maitiro ekushandura mapurogiramu ekutanga? Mune ino kesi tinogona kubatsira nhanho dzakatsanangurwa mugwara redu. Ungachinja sei default maapplication mukati Windows 10.
Hatidi here kusiya Safari kunze kwebhuruu kana isu tichiri kufunga kuti ndiyo yakanakisa browser ye iPhone? Mune ino kesi tinogona kuramba tichiverenga muchinyorwa chedu Safari tricks uye zvirinani iPhone uye iPad browser maficha, saka unogona kubva wangodzidzira matipi akasiyana anobatsira uye akavanzika mabasa kuti urambe uchishandisa iyi default browser.
Ndeipi nhare mbozha ine Internet inokurumidza mu4G LTE?
Maitiro ekugadzira playlist paYouTube
Maitiro ekugadzirisa Gmail nezvakanakisa maturusi
Maitiro ekuteerera kumahara mimhanzi neGoogle Mubatsiri neNest
Maitiro ekuvhura zvinyorwa zvidiki paTV
Maitiro ekuchaja foni yako isina charger
Maitiro ekuteerera kumimhanzi pane smart watches (Android, Apple uye nevamwe)
Maitiro ekuisa iyo TV kunze kwekumira mamiriro
Kugadzira mimhanzi nyowani nehungwaru hwekunyepedzera
Iyo yakanakisa slideshow inogadzira maapplication eApple uye iPhone
Yakanakisa Android 11 Zvimiro - Maitiro Ekuti Uvawane Iwo Pane Chero Runhare
Maitiro ekuona Mediaset Play paTV
Nhare dzakanakisa dzakakwenenzverwa, nhare dzisingaperi: ndeapi aunofanira kusarudza
Maitiro ekushandisa Google Lens pane Android uye iPhone / iPad
OLED kana QLED: ndeipi tekinoroji yakanaka kwazvo yeTV nyowani?